प्रहरीले भन्यो, “११ गोली मनोज पुनलाई लाग्दा समेत उनी उनि उठेर भाग्ने प्रयास गर्दै थिए” त्यसपछि…. (भिडियोसहित) – Etajakhabar
बुटवल । बुधबार बिहानै सबैतिर गुण्डा नाइके मनोज पुन मारिएको खबर सुनियो । सामाजिक सञ्जालदेखि सञ्चारमाध्यमहरु समेत पुन हत्याको खबरले भरिए । नेपाल छिर्न लागेका पुन बुधबार बिहान ३ बजेतिर प्रहरी इन्काउन्टरमा मारिएका थिए ।
उनी नेपाल छिर्न लागेको भन्ने सूचनाको आधारमा पक्राउ गर्न गएको टोली र उनको जम्का भेट भयो । सर्च अभियनाका क्रममा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी) र स्थानीय प्रहरीको टोलीमाथि पुनले फायरिङ गरेपछि प्रहरीले जवाफी फायरिङ गरेका थियो । जवाफी फायरिङको क्रममा प्रहरीले १९ राउण्ड गोली खर्च गर्‍यो ।
जसमध्ये ११ गोली पुनलाई लागेको थियो भने ८ गोली सोम घलेलाई लागेको थियो । शरिरका विभिन्न ठाउँमा गोली लाग्दा समेत उनी भाग्ने प्रयास गर्दै थिए । सर्च अभियानका एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार त्यत्रो मात्रामा शरिरभर गोली लाग्दा पनि उनी भाग्ने प्रयास गरिरहेका थिए । तर अन्ततः उनी ढले ।
सर्च अभियानको नेतृत्व गरिरहेका थिए सिआईबीका डिएसपी अंगुर जिसीले । उनी पुन नेपाल छिर्न लागेको भन्ने विशेष सूचनाको आधारमा केन्द्रबाट खटिएका प्रहरी अधिकारी हुन् । उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको टोलीले समेत सहयोग गरेको थियो । डिएसपी जिसी नुवाकोट कबिलासका स्थायी बासिन्दा हुन ।
के प्रहरी उनको इन्काउन्टर गर्नकै लागि गएको थियो ? भन्ने प्रश्नमा सीआईबी प्रमुख डिआईजी पुष्कर कार्कीले भने, ‘मनोज पुन नेपाल छिर्न लागेको भन्ने सूचना आएको थियो । उक्त सूचनाको आधारमा हाम्रो टोली र जिल्लाको टोली परिचालन भयो । हामीले उनलाई जसरी पनि पक्रेर ल्याउने आदेश दिएका थियौं । तर उनले फायरिङ गर्न थालेपछि आत्मरक्षाको लागि प्रहरीले जवाफी फायरिङ खोल्यो ।’ ﻿
प्रकाशित मिति: बुधबार, फाल्गुण ०९, २०७४ समय: १७:१६:०५